ရခိုင်မလေး တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်စာ ~ Myanmar Express
From : သင်းချိုရခိုင်အရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး စာရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ အားတင်းထားခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ရခိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ အားကြိုးပြတ်မတတ် ခံစားနေခဲ့ရလို့ မရေးဖြစ်ခဲ့ပြန်ဘူး ... လေးစားရတဲ့ ရေးဖေါ်ရေးဖက် အစ်မများရေးမလားဆိုတော့ ဖြစ်တဲ့နေ့က သူကိုယ်တိုင် အားကိုးရာမဲ့အသံနဲ့ ဖုန်းဆက်လာတော့ ကိုယ်ကအားပေးလိုက်ပါတယ် ... ကိုယ်တိုင်လည်း အိပ်မရတာနဲ့ မနက်ဖက်အလုပ်က အိမ်ပြန်သွားရမလို သတိလစ်သွားမတတ် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ... အခုဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမှာ လူသိများသွားတာက တောင်ကုတ်ကိစ္စကြောင့် ... ဂျာနယ်တွေ ဥပဒေတွေ ဝင်လာတာ တောင်ကုတ်ကြောင့် ... တောင်ကုတ်က ဖြစ်ရပ်ဟာ တကယ့်ကို အမှားကြီးကြီး ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ ... သေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ် ... အားလည်း အားနာမိပါတယ် ... တစ်ခုတော့ရှိတယ် သေသွားတာကို မလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူး ... အဲဒီလုပ်ရပ်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင် ရမ်းဗြဲက မသီတာထွေးကိစ္စက ဒီလိုပဲ လူသူမသိ အမှောင်ချခံလိုက်ရမှာပါပဲ ... ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ လည်း အများကြီးပါ .... ရခိုင်တွေက မွတ်ဆလင်ကုလားကို မုန်းတီးနေတာ ရန်လိုနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အရင်ဆုံး ပြောပါရစေ ... ရခိုင်တွေသာ မုန်းတီးရန်လိုနေရင် ရခိုင်ပြည်မှာ အေးချမ်းတဲ့ နေ့လို့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့် စော်ကားလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မိမိတို့ကို လုံခြုံမှု မပေးနိုင်လို့ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ပဲ တရားရုံးလုပ်ခဲ့ရတာ ကျွန်မသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပါပဲ ... ဒါတောင် ကျွန်မက ကျွန်မမွေးပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကိုပဲ သိလို့ ပြောတာပါ ... ကဲ ဖြစ်စဉ်တွေ အားလုံးကို အစကောက်ကြည့်ရအောင် .... အစကောက်တယ် ဆိုတာနဲ့ အခုလောလောဆယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကို မကောက်ဘဲ ... ကျွန်မမွေးခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းကို စကောက်ရအောင် မမွေးခင်ကဟာကို ပြောရင် မုသားဖြစ်မှာ စိုးလို့ .... ရင်ထဲမှာ အမုန်းတရားမပါဘဲ အခြေနေကို သုံးသပ်ရေးသွားမှာပါ ... ကျွန်မရေးတာတွေ မှန်သည် မှားသည် ရခိုင်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေ ... ဟိန္ဒူတွေ လည်း ရှိပါတယ် ... ဗမာလူမျိုး ၊ ချင်းလူမျိုးတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိပါတယ် ... သူတို့တွေနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးကြည့်ကြစေချင်တယ် ... ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာမှာ နေပြီး မလုံခြုံမှုတွေကို ခံစားဖူးကြပါသလား ... ရခိုင်တွေဟာ အဲလိုမျိုးတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာကြသူပါ ... စစ်အစိုးရကိုပဲ ကြောက်နေခဲ့ရတဲ့ လူတွေအတွက် စစ်အစိုးရရော လူမျိုးခြားရန်ရော စိုးရိမ်ခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်တွေကို ဘယ်လိုနားလည်ပေးကြမှာလဲ ... စစ်အစိုးရ လက်အောက်ကို ပြန်မသွားချင်သလိုပဲ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာ အမှန် ဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်ပါလျက် လူမျိုးခြားတွေနဲ့ အပြန်အလှန်သတ်ဖြတ် ကျီးလန့်စာစားရတဲ့ ဘဝကို ခုံမင်နှစ်သက်နေကြတယ်လို့ ယူဆပါသလား ... ရခိုင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တွေပါ ... ရခိုင်မှာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကို လေးလေးနက်နက် သက်ဝင်ယုံကြည်ကြပါတယ် ... ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတွေထဲမှာ တရားစခန်း မဝင်ဖူးတဲ့လူ သစ္စာလေးပါးတရားကို မနာဖူးတဲ့သူ အရမ်းရှားပါတယ် ... ဒီစကားပြောတာက ရခိုင်တွေဟာ လူသတ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ တရားတစ်ဖက် ၊ ဓါးတစ်ဖက် နေကြရတဲ့ သူတွေပါ .... ကျွန်မမှတ်မှတ်ရရ ရှိတဲ့ ပဋိပက္ခကနေ စပြောရအောင် ... ၁၉၉၂ ကျွန်မ ၇ နှစ်အရွယ်ပေါ့ ... အဲဒီတုန်းက ရခိုင်နဲ့ ကုလား အကြီးအကျယ်ကို ဖြစ်တာပါ ... စတာက ကုလားက ဝေသာလီဆောင်ကို ဖေါက်ဝင်တာက စတာပါ ... အဲဒီကနေစသွားတဲ့ ကိစ္စ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေ ကျောင်းကအိမ်ကို ပြန်ရင် မိဘလာခေါ်မှ ပြန်ရတယ် ... မိဘလက်လုပ်လက်စားကလေးတွေက အုပ်စုအကြီးကြီးဖွဲ့ပြီးပြန်ရတယ် ... ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားလိုက်ရတယ် ... ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းကလည်း ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ဖြေရှင်းကြရတာပဲ ... ပြည်မက ဘယ်သူတစ်ယောက်သိခဲ့လို့လဲ ... ရခိုင်ပြည်ဟာ အနောက်ဖက်က ကုလားကို ခါးစည်းခံဖို့များထားသလား မှတ်ရတယ် .... ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်ကြမ်းဖက်မှုကိုကြိုတင်တားဆီးနိုင်ခြင်း..။ (ကိုယ်တွေ့ကြုံသူတစ်ဦး ရေးသားချက်) တချိန်တုန်းက ၁၉၉၂-၉၃ လောက်က ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ သူပုန်တွေကို နအဖ အစိုးရတပ်က ပြုတ်လုနီးပါးတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်....သူတို့က ..မောင်တောမြို့နယ် အလယ်သံကျော်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကနေတစ်ဆင့်..လူ ၁၅၀၀ လောက်စက်လှေတွေနဲ့ဝင်လာတယ် လက်နက်မပါပဲနဲ့ပေါ့..ဒီဘက်ကသူတို့အနွယ်တွေဆီကို လက်နက်ကျည်ဆံတွေကား ၇စီးတိုက်စာလောက် ကြိုပို့ထားတယ်လေ လူနဲ့လက်နက်နဲ့ မတွဲမိခင်မှာ နအဖ စစ်တပ်တွေကပိတ်ဆို့ ရှင်းလင်း လိုက်နိုင်ပါတယ် တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ........ကျောက်ပန်းနု ရွာဘက်က လှိုဏ်ဂူတစ်ခုထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ လက်နက်တိုက်ကိုလဲသိမ်းမိပါတယ်၊ လက်နက်တွေအများကြီးလို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်သူတို့နဲ့လက်နက်နဲ့သာတွဲမိလိုက်ရင်.......မလွယ်ပါဘူး...အဲဒီတုန်းကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ကိစ္စ မီဒီယာတွေအေရမ်းအော်ခဲ့ကြပါတယ်....ဘီဘီစီ နဲ့ အာအက်ဖ်အေ အသံအကျယ်ဆုံးပါ............ .ဒေသခံတွေရဲ့ပြောစကားအရတော့ မြန်မာဘက်ကမ်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့အမာခံတွေအများစုကိုပါရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၊အဲဒီတုန်းကစပြီးနစကတပ်ဆိုတာစဖွဲ့စည်းပြီးသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ (ဒေါက်တာဇာနည် ပြောကြားချက်) ကဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြားထဲမှာ သိပ်ကို မကြီးတဲ့ ဖြစ်ပွါးမှုတွေနဲ့ ရုန်းထွေး နပမ်းလုံးရင်း ... ၂၀၀၁ မှာ တစ်ခါ ထပ်ပြီးတော့ ဖြစ်လာတယ် ... ကျွန်မတို့က ၁၀ တန်းကျောင်းသူတွေပေါ့ ... ဇန်နဝါရီလ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကြိုဆိုတဲ့ အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ ပထမဆုံး ကုန်စည်ပြပွဲကြီးကို မြို့တော်ခန်းမ မှာ ကျင်းပပါတယ် ... စာမေးပွဲရှိနေတဲ့ ကျွန်မတို့တောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မနက်ဘက် တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်အောင် သွားလိုက်သေးတယ် ... စည်လည်းအရမ်းစည်တာကိုး ... ပထမဆုံး အကြိမ်လည်းဖြစ် မော်ဒယ်တွေကလည်း ညဖက်ဆို ရှိုးတွေဘာတွေ လျှောက်တော့ စည်တာမဆန်းပါဘူး ... သက်မွန်မြင့်တို့တောင်ပါသေးတယ် ... စင်ပေါ်ကနေပြီး စွပ်ကျယ်တွေပစ်ပေး၊ ဆပ်ပြာမှုန့်ထုပ်တွေ ပစ်ပေးနဲ့ ဆိုတော့ လူမစဲဘူးလေ ... နယ်တွေကတောင် လာကြပါသေးတယ် ... အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်မက အဘွားအိမ်မှာ သွားအိပ်ရပါတယ် ... စာမေးပွဲနီးလာပြီဆိုတော့ အစ်မဝမ်းကွဲက ဂိုက်လုပ်ပေးလို့ ... သူတို့မှာလည်း သူတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရယ် အဘွားရယ်ပဲ ရှိတာဆိုတော့ အဖေါ်လည်းရအောင်ဆိုပြီး သွားအိပ်ရတာပါ ... တစ်ည ကျွန်မစာကျက်နေတုန်း ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ သံချောင်းခေါက်သံ အဆက်မပြတ်ကြားရပါတယ် ... လမ်းပေါ်မှာလည်း လူတွေအများကြီးပဲ ... ဒီလိုပဲ ကျွန်မတို့ဘက်မှာ မီးလောင်ရင် သံချောင်းခေါက်ရင် လူတွေ အကုန်လုံး လမ်းတွေပေါ်ကိုဆင်း ယောက်ျားတွေက ကား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ ဆိုက္ကားတွေနဲ့ လိုက်သွားတတ်ကြပါတယ် ... တခါတလေ မီးသတ်ကားမရောက်ခင်မှာ ဝိုင်းပြီးငြိမ်းသတ်ပေးတဲ့ လူတွေကြောင့် မီးငြိမ်းသွားရတာ များပါတယ် ... အဲဒါကြောင့် မီးလောင်ရင်တောင် မီးသတ်ကို အားကိုးတဲ့ အကျင့်သိပ်မရှိတော့သလိုပဲ ... မီးသတ်ဆိုတာ ရယ်စရာတစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေတာ ... ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်စောင့်ရှောက်ရင်း နေလာကြတာပါ ... ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့မှာ ထွက်သွားတဲ့ လူတချို့ ချက်ချင်း ပြန်လာပြီး မိန်းမတွေနဲ့ ကလေးတွေကို အ်ိမ်ပေါ်ကို တက်ခိုင်းပါတယ် ... လမ်းမှာ မနေနဲ့ အိမ်ပေါ်ကိုတက် တံခါးကို လုံအောင်ပိတ်ထား ဆိုတဲ့ မှာသံတွေနဲ့ အတူ "ဟိုမှာ ရခိုင်နဲ့ ကုလားဖြစ်နေကြပြီ ... ဘာသံပဲကြားကြား ကိုယ့်အ်ိမ်ထဲက မထွက်နဲ့တဲ့" ... ကျွန်မအမေဆိုရင် သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ ... ကျွန်မက အဘွားအ်ိမ်မှာမို့လို့တဲ့ စိုးရိမ်လို့ ထိုင်ငိုနေခဲ့တာ ... ဖြစ်တာကလည်း အဘွားအ်ိမ်နဲ့ဆို လမ်းတွေ သိပ်မဝေးဘူးကိုး ... တစ်ညလုံး မအိပ်ကြပဲ လမ်းက အသံတွေကိုပဲ နားစိုက်နေခဲ့ကြတာ ... အဲဒီအချိန်တွေတည်းက ဥပဒေနဲ့ ဝင်ထိန်းလိုက်ရင် သိပ်ဆိုးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ... မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း အိမ်ကို တန်းပြေးရတယ် ... အဲဒီအချိန်မှာမှ သိလိုက်တာက ကုန်စည်ပြပွဲ နောက်ဆုံးညဆိုတော့ ၁၂ နာရီလောက်အထိ လူတွေ မစဲဘူးတဲ့ ... ကောင်လေး နှစ်ယောက် ၊ ကောင်မလေး နှစ်ယောက် နဲ့ ကိုရင်လေးတစ်ပါး ညဖက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ ပွဲကြည့်ရင်း တူတူပြန်ကြတာ ကုလားရွာက ဖြတ်ပြန်ရတော့ ကုလားတွေက ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို သားပြော၊ မယားပြော လှမ်းပြောလို့တဲ့ ... ကုလားရွာက ဖြတ်ပြန်ရတယ် ဆိုလို့ ပြောဦးမယ် ... စစ်တွေမှာ ကုလားရွာ တော်တော်များများက အဓိက လမ်းကြီးတွေပေါ်မှာ ရှိတယ် .. နည်းတဲ့ ရွာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး ... ပြီးရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံရှေ့တည့်တည့် Main လမ်းမဖြစ်တဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်း ဗလီအကြီးကြီး နည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူး ... အဲလို ကောင်မလေးတွေကို ပြောတော့ ကောင်မလေးတွေက ပြန်ဆဲလို့တဲ့ ဟိုက ပိုရိုင်းလာတော့ ကောင်လေးတွေကပါ ဝင်ပြောတော့ ကုလားရပ်ကွက်မှာ အဲဒီလူခြေပြတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ သူတို့တွေက ဆွဲလားရမ်းလား လုပ်တာနဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်၊ ကိုရင်လေး နဲ့ ဆွဲနေကြချိန် ကောင်မလေးတွေက ထွက်ပြေးသွားကြလို့ လွတ်သွားပါတယ် ... သူတို့ကလည်း ကောင်မလေးတွေကို အာရုံမစိုက်တာလည်း ပါပါလိမ့်မယ် ... ကောင်လေးနှစ်ယောက်က နယ်က ကျောင်းလာတက်တာပါ ... ရွှေစေတီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေပြီးတော့ ကျောင်းတက်နေကြတာပါ ... ဖြစ်ချင်တော့ စည်းကမ်းအရမ်းကြီးတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီး ခရီးလွန်နေချိန် ဖြစ်နေလို့ ခုလို ညဖက်ကို ခိုးထွက်လို့ ရကြတာပါ ... အဲလို ထိုးကြိတ်ရင်းနဲ့ သူတို့ရွာထဲကို ဆွဲသွင်းရာက ကောင်လေးတစ်ယောက် လွတ်သွားပါတယ် ... ကောင်လေးကလည်း ပွဲဖက်ကိုသာ ပြန်ပြေးရင် ပိုကောင်းသွားမှာပါ ... လူတွေ အများကြီး လိုက်လာနိုင်ကြမှာ ... ဒါပေမယ့် ကောင်လေးလည်း ကိုယ်လွတ်ရာပြေးရင်း ရွှေစေတီကျောင်းကို ရောက်သွားပါတယ် ... ရွှေစေတီကျောင်းဟာ အကြီးဆုံး စာသင်တိုက်မို့လို့ ကိုယ်တော်တွေ ကိုရင်တွေ အများကြီးပါပဲ ... အဲဒီမှာ ကောင်လေးက ကိုယ်တော်ကို သွားလျှောက်တော့ ကိုယ်တော်တွေရော ကိုရင်တွေရော လိုက်လာခဲ့ကြပါတယ် ... ပြီးတော့ အဲဒီနားမှာ လူသွားတောင်းတယ် ... တစ်ယောက်မှ ဘာမှ မပြောကြဘူး ... ဆွဲသွင်းသွားတဲ့ အဆောက်အဦးထဲကို ဝင်ရှာတယ် ... ပြီးမှ ကိုရင်လေးခေါင်းကို ချိတ်ထားတာတွေ့ပါတယ် ... ခန္ဓာမတွေ့ပါဘူး ... ဒီလိုနဲ့ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ရာက ကုန်စည်ပြပွဲက လူတွေလည်း ရောက်လာပြီးတော့ အိမ်တွေကို ရှာကြတယ် ... မတွေ့ပါဘူး ... အဲဒီမှာပဲ ဒေါသတွေ ထွက်ပြီးတော့ ကိုရင်လေးခေါင်းကို တွေ့တဲ့ အဆောက်အဦးကို မီးရှို့ကြတာပါ ... အဲဒါ မိုးအလင်း ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက်ချကြတာ ... ငရဲကျနေသလိုပါပဲ ... လူတွေရော ဘုန်းကြီးတွေရော ... သူတို့ဘက်ကလည်း ရှိသမျှလူတွေပေါ့ ... ရတဲ့ လက်နက်နဲ့ဆော်ကြတာ ... ရခိုင်တွေက ကလေး၊ မိန်းမ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို မသတ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့် သူတို့က တွေ့သမျှသတ်တယ် ... ပြီးရင် သူတို့မိန်းမတွေက သူတို့အိမ်တွေပေါ်ကနေ ပုလင်းကွဲတွေ ပစ်ချကြတယ် ... ကိုယ်တော်တွေလည်း ခေါင်းကွဲတဲ့သူကွဲ ... ဆီတွေလောင်းကြတယ် ... မီးတွေ ပစ်ကြတယ် ... ဒီတော့ ဒီကလည်း သူတို့ အ်ိမ်တွေပေါ်ကို ဆီဗုံးတွေနဲ့ မီးကွင်းတွေ ပြန်ပစ်ကြတယ်ပေါ့ ... အဲဒီအချိန်တွေမှာ ကျွန်မတို့ ဘယ်ကတရားဥပဒေကိုသွားပြီး အားကိုးရမှာလဲ ... တရားဥပဒေလာဖို့ အသေခံစောင့်နေရမှာလား ... ပြီးမှ စစ်တပ်က ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီး လော်စပီကာနဲ့ အော်လို့ သူ့ကို နှစ်ဘက်လုံးက ဘယ်ကထုမှန်းမသိ နဖူးထိသွားတယ် ... တပ်တွေလည်း ဒီအတိုင်း ကားရပ်ပြီးကြည့်ရတဲ့ အခြေနေဖြစ်သွားတယ် ... သူတို့တွေလည်း ရခိုင်ရွာတွေကို မီးတိုက်တယ် ... ကျွန်မတို့ အဘွားအိမ်ပါသွားလို့ ပြေးကြရတယ် ... ဆွေမျိုးတွေ အ်ိမ်တွေလည်း ပါသွားတယ် ... ရက်ကွက်လိုက်ကြီးတွေ ပျက်စီးသွားတာ ...သူတို့ ရပ်ကွက်တွေရောပေါ့ ... ကြောက်စရာကောင်းအောင် တွေ့လိုက်ရတာက ... သူတို့ရဲ့ ဒေါ်လာဆိုတဲ့ အထင်ကရ တည်းခိုခန်းမှာ လက်နက်သေတ္တာတွေ တွေ့လိုက်ရတာပဲ ... ငွေစက္ကူတွေ ဒေါ်လာတွေ အများကြီးပဲ ... ဘုန်းကြီးတွေက အကုန်မီးရှို့ဖျက်စီးပစ်လိုက်တာ ... ပိုင်ရှင်တွေက အဲဒီနေ့မှာပဲ မော်တော်ဘုတ်တွေနဲ့ ညတွင်းချင်း ထွက်ပြေးကြတာ ... အဲဒီဟာကိုသာ မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင် တွေးတောင် မတွေးရဲဘူး ... နောက်တစ်ရက်မှာ တပ်က မာရှယ်လောထုတ်လိုက်တယ် ... ညဖက် ၆ နာရီ အပြင်ကို မထွက်ရ ...အဲဒီအတွက်လည်း တရားဥပဒေနဲ့ လုပ် မလုပ်လည်း မကြားရ မသိရ ... ရခိုင်ပြည်ဟာ ရေကြောင်းခရီးကို အဓိက အားထားရတဲ့နေရာ ... ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ဆက်စပ်နေတော့ လှိုင်းလေ အရမ်းကြမ်းတယ် ... ကုလားတန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး နေ့တိုင်းသွားပြန်နေရတဲ့ လူတွေ ရှိတယ် ... အဲဒီမှာ မုန်တိုင်းမိပြီး မှောက်သွားတဲ့ မော်တော်က အဘွားကြီးနဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်က ဘေးနားကဖြတ်သွားတဲ့ ပိုက်လောင်းလေးကို အကူညီတောင်းတော့ ကုလားတွေ ငါးသွားဖမ်းတာဖြစ်နေတယ် ... သူတို့လည်း လောင်းပေါ်ကို ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ပါလာတဲ့ အဘွားကြီးကို လည်ပင်းလှီးသတ်ပြီး ရေထဲကို ချပလိုက်တယ် ... မိန်းမကြီးကိုတော့ အဓမ္မကြံပြီးမှ ဝတ်ထားတဲ့ နားကပ်တို့ လက်ကောက်တို့ ဆွဲကြိုးတွေကိုယူ လည်ပင်းကို ဖြတ်ပြီးမှ ပစ်ချလိုက်တယ် ... မြင်သွားတဲ့ တခြားလှေက လူတစ်ယောက်အသတ်ခံရပြီး နောက်တစ်ယောက်လွတ်သွားလို့ ပြန်တိုင်တယ် ... ဒါလည်း ဖမ်း မဖမ်း မသိရဘူး ... ဒီလိုမျိုး အားကိုးရတဲ့ တရားဥပဒေနဲ့ ကာကွယ်ပေးထားတာပါ ... ကျွန်မတို့မှာလည်း ကိုလဂွန်းအ်ိမ်တို့လိုမျိုး သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပါတယ် ... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် အစ္စလာမ်ပေမယ့် ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမကို ရှိခိုးတယ် ... ကျွန်မတို့ ဘုရားရှိခိုးရင် လက်အုပ်လေးချီထားတယ် ... သူ့အိမ်မီးလောင်တုန်းက ရခိုင်တွေကပဲ ငြိမ်းပေးခဲ့ကြတာ ... သူတို့ မောင်နှမလေးယောက်လုံးကို ကျွန်မတို့တွေ အရမ်းချစ်ကြပါတယ် ... တခြားကောင်လေး ၃ ယောက်ရှိပါသေးတယ် ... ကျောင်းကထိန်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းက သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ပဒေသာပင်တွေ သွားယူကြတာ ... ကျွန်မတို့ ဘုရားကို ဝတ်မပြုရင်သာနေမယ် ... အရှင်ဘုရားတွေ ဆိုရင်လည်း လေးလေးစားစားနဲ့ ပြောတတ်တယ် ... ကျွန်မတို့ကို မရိုင်းရင် ကျွန်မတို့ကို မစော်ကားရင် ကျွန်မတို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မလုပ်ပါဘူး ... ကျွန်မတို့ကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာကို မုန်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ... ကျွန်မတို့မှာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာမှာ နေပြီး ကိုယ့်မြေဖြစ်ပါလျက် အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ ဘဝကို ကျော်ဖြတ်လာကြတာပါ ... အဲလိုအချိန်တွေမှာ လာကယ်မဲ့ ရဲတွေကို စောင့်နေရင် ကျွန်မတို့ ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားကြမလဲ ... ရပ်ကွက်ထဲက ယောက်ျားငယ်လေးတွေက အုပ်စုလိုက် အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်ရင်း ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကို ကိုယ်စောင့်ရှောက်လာခဲ့ကြတဲ့ အကြိမ်တွေ ရေတွက်လို့ မရပါဘူး ... ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာမှာ နေပြီး မလုံခြုံတဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးကြပါလို့ အတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူး ... ခုလည်း ရမ်းဗြဲမှာ မသီတာထွေးကို သတ်တဲ့ကိစ္စကို ဘာတစ်ခုကမှ အသိအမှတ်ပြုလုပ်ပေးတာမျိုးမရှိဘူး ... လူတွေတောင် မသိကြဘူးလေ ... တောင်ကုတ်က လူသတ်မှုပေါ်မှ သိသွားကြတာ ... တောင်ကုတ်ကကိစ္စအတွက် ထိခိုက်ဝမ်းနည်းရပါတယ် ... သေသွားတဲ့သူတွေ အတွက်ရော ... ကျွန်မတို့ကို ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ယူဆပြီးကျူးလွန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ညီကိုမောင်နှမတွေကိုရော ... အရမ်းကို ထိခိုက်ကြေကွဲရပါတယ် ... ဒါပေမယ့် အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုက ရခိုင်ဒေသကို ဥပဒေ အမှောင်ချထားလို့ မရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ ... ကျွန်မတို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက တကယ်ကို ရိုးလွန်းလို့ ဒေါသကိုထုတ်ပြ လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာ ... ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြေးလာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ရပ်သွားမှာကိုလည်း သူတို့တွေ မသိလောက်အောင်ကို ရိုးကြ နုံကြ အကြတာ ... သူတို့ အမျိုးသားရေးကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ အရိုးခံစိတ်တစ်ခုပဲ ရှိတယ် ... အလိမ္မာ မရှိကြဘူး ... ပရိယာယ်မရှိကြဘူး ... ကျွန်မသာဆိုရင်တော့ အဲသလိုမလုပ်ဘူး ... ကိုယ်လုပ်စရာမလိုဘဲ သူ့စားရိတ်နဲ့သူသွားအောင်ပဲ လုပ်မယ် ... ဒါပေမယ့် ပရိယာယ်မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုတွေက ကျွန်မတို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ သူတို့တွေ ရှိကြောင်းကို ပြလိုက်သလိုပဲ ... " ကျွန်မတို့ သွားနေကြတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်စေတဲ့ အတွက်ရော ... လူ့အသက်ကို သတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ရော မုန်းတယ် ... ပြီးရင် သူတို့တွေ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်မိသွားတာမို့လို့ သနားတယ် ... နောက်ဆုံး အကာအကွယ်မရှိတဲ့ကျွန်မတို့တွေအတွက် သူတို့တွှေကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်မိတယ် ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ် ... " သူတို့လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး ... လုံးဝကို ကန့်ကွက်ပါတယ် ... ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတိုင်း ပြစ်ဒါဏ်ကို ခံကြရမှာပါ ... ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ဒီလိုဖြစ်နေတာ ဘာတွေကြောင့်လဲ ... ကျွန်မတို့ ဒေသမှာ တရားဖြစ်လာရင် တကယ်အပြစ်ပေးလ်ိမ့်မယ်လို့ မယုံကြည်နိုင်ကြတော့လို့ပဲ ... တကယ့်ကို တရားဥပဒေ မစိုးမိုးလို့ပဲ ... ရခိုင်တွေက အချင်းချင်းပဲ စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမကို လူမျိုးခြား လက်ထဲကို မရောက်သွားရအောင် ကာကွယ်လာကြရတဲ့ဘဝ ... ဒါတွေကြောင့်ပဲ ကုလားနဲ့ ရခိုင်လက်ထပ်တာမျိုး မရှိသလောက်ရှားတာ ... အနောက်ရိုးမမှာ ရခိုင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ကုလားတွေ စိမ့်ဝင်မသွားဖို့ မြေခံကတုပ် အနေနဲ့ ခံပေးနေကြရတယ်ဆိုတာကို သိရင် ... ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ဝေးပြီး ရခိုင်မြေမှာ ရခိုင်တွေတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားတွေကို ရခိုင်တွေ စိတ်အေးလက်အေး ရှိခိုးရမယ့် နေ့တွေကို တောင့်တရင်း .... ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ ခိုကိုးရာမဲ့သောဘဝက အကာအကွယ်မဲ့သောဘဝက၊ ကိုယ့်အ်ိမ်မှာ ကိုယ်နေရင်း ကြောက်လန့်နေရတဲ့ ဘဝက၊ သံသယတွေနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းရတဲ့ ဘဝက တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ... ( မှတ်ချက်။ ။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်းကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ ... ရခိုင်ပြည်ရဲ့ အမှောင်ချခံထားရတဲ့ အခြေနေကို လှစ်ဟပြရုံသက်သက်သာ ... တခြားသောသူတွေ ဒီကိစ္စကို ပြီးစေ ငြိမ်းစေချင်တာထက် ရခိုင်တွေက ပိုတယ်ဆိုတာကို သိထားစေချင်ပါတယ် ... ရခိုင်ဒေသမှာ အဓိက ဖြစ်နေတော့ မိသားစုတွေ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အတွက် ရတက်အေးကြပါ့မလား ... ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ ... ) Myanmar Express
7 June 2012 21:41
ကုရန်အာန်ကျမ်း ဟာ ဘာသာရေးစာအုပ် ထက် တရုတ် စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်းလိုမျိုး ကျမ်းဖြစ်တယ်ဘက်ပေါင်းစုံက ထောင့်စေ့အောင် ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆို တာ ပြည့်စုံတဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်းမျိုးဖြစ်တယ်တရုတ် စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်းလို တိုင်းပြည်တစ်ပြည် ကို ဘယ်လို ထိုးဖေါက် ၀င်ရောက်မယ်ကိုယ့်အင်အား မကောင်သေးခင် မှာ ရန်သူဘာသာခြားတွေကို ဘယ်လိုလိမ်ညာရမယ် deceitဘယ်လိုအင်အားကောင်းအောင် ကျိတ်မွေးရမယ်လူပွားဖို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ မျိုးပွားသူ(မိန်းကလေး)တွေ ကို ကိုယ့်ဘက် က မိန်းမတွေ ကို ရန်သူဘာသာခြားတွေ နဲ့မယူမိအောင် သော့ခတ်ပြီး သိမ်းထားရမယ်။တစ်ဘက် က နေ ရန်သူဘာသာခြားတွေရဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကို ရသလောက် ယူရမယ်( ကိုယ့်ရဲ့ မွတ်စလင်မ် အင်အား ကောင်းလာစေသလို၊ တစ်ဘက် က ရန်သူ့ဘာသာခြားအင်အား နည်းသွားရမယ်) တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် အချင်းချင်း ညီညွတ်ရမယ်၊ မွတ်စလင်မ် စာသင်ကျောင်းတွေ အစည်းအဝေးတွေ မတက်မနေရ ၊ အဆင့်ဆင့် ကွပ်ကဲအုပ်ချူပ် ရမယ်၊ မွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင်တွေချပေးတဲ့ စကားကို နားထောင်ရမယ်အင်အားမကောင်းသေးခင် ရန်သူဘာသာခြားတွေက မျက်နှာကိုတံတွေးနဲ့ ထွေးရင်တောင် သည်းခံပြီး အင်အားကောင်းလာတာနဲ့ရန်သူဘာသာခြားတွေကို တစ်ခါတည်းလုပ်ရမယ်၊ အပြတ် လုပ်ရမယ် ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် အချင်းချင်း network လုပ်ရမယ် အမြဲတမ်း စည်းဝေး တိုင်ပင်လုပ်ရမယ်ကမ္ဘာ ပေါ်က ညီအစ်ကို မွတ်စလင်နိုင်ငံ ဆော်ဒီ၊ ကာတာ၊ တို့ နဲ့ အမြဲ network ရှိမယ်လက်ရှိဘယ်နိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်လူအင်အားတော့ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေး၊ မီဒီယာလိုမယ်၊ဖြစ်တယ် ညီအစ်ကို မွတ်စလင်နိုင်ငံ ဆော်ဒီ၊ ကာတာ၊တို့ က ထောက်ပံ့ပေးမယ်၊ အခြေအနေကို တင်ပြ၊အချက်အချာ ကျတဲ့ နေရာတွေကို ယူထားရမယ်။ ကိုယ့်လူမွတ်စလင်မ် တွေချည်း ပဲ ရပ်ကွက် မြို့နယ်ဖြစ်ရမယ်၊ ရန်သူ(ဘာသာခြား) တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှင်းထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးမှာ ၇၈၆ ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် အချင်းချင်း အားပေးရမယ်၊ ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် ထဲက ငွေ ရန်သူဘာသာခြား ဆီ မရောက် စေဖို့ ။အစစ အရာရာ အားလုံးမှာ အစိုးရ အရာရှိတွေ ၊ လိုအပ်သူတွေ ကို သည်းခံပြီး ပေါင်းမယ်။ မှတ်ထားပါငါတို့မွတ်စလင်မ် တွေရဲ့ ဦးတည်ချက် ဟာ တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်၊ အဲဒီပန်းတိုင် မရောက်မချင်း အားလုံးကို သည်းခံရမယ်၊ ငါတို့အားလုံးဟာ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်၊ အဓိက အချက် က မွတ်စလင်မ် မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေ များများ မွေးဖို့ ပဲရေရှည် စစ်ပွဲဖြစ်တယ်၊ သားမြေး မျိုးဆက်နဲ့ ချီတိုက်ရမယ်၊ နောက်ဆုံး ငါတို့ သားမြေးတွေ ခေတ်မှာ ရန်သူဘာသာခြား နိုင်ငံကို ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် တွေ သိမ်းပိုက်နိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာ တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှ အသီးသီးတို့ ဟာ အလာအရှင်မြတ် အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ငါတို့ မွတ်စလင်မ်တွေ ဟာ ဘာသာရေးစစ်မြေပြင် က စစ်သားတွေပဲဖြစ်တယ်ငါတို့သေသွားခဲ့ရင်တောင် ငါတို့ သားမြေးမွတ်စလင်မ်တွေ အတွက် ခြေကုပ်ရယူပေးခဲ့ရမယ်....Allahu...Akbarr....Allahu...Akbarr....Allahu..Akbarr..
7 June 2012 22:17
ကဲ... နစက တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးနေရာယူ...... ပစ်ဆိုတာနဲ့ရှိတဲ့ မွတ်ကုလားတွေကိုပစ်..... အစိတ်သားတောင်မကျန်စေနဲ့....
အမှန်တကယ် မျက်ရည်ဝဲမိပါရေ မမ
ဒီအသက်ခံရတဲ့ မွတ်ဆလင်(10)ဦးက ဘာလို့အသက်ခံရတာလဲလို့ အများကမသိကျဘူး... ဒီဆယ်ရောက်က သီတာထွေး အမှု ပါးစပ်ပိတ်အောင် ငွေနဲ့သွားဖို့မလို့ တောင်ဂုတ်မြို့အသွား ရွာသားတွေက ကြိုတင်သတင်းရလို့ သတ်ပစ်တာ အပြစ်လား( သီတာတွေ ဘယ်လိုသေခဲ့ရသလဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကောင်းကောင်းသိပုံမရဘူး 1.မဒိန်းကျင့်ခရ၏ ကုလား သုံးဦးမှ တလှည့်စီကျင့်၏ 3by 1ပေါ့, 2.ကုလားများ မဒ်ိန်းကျင့်ပြီး အားမရဘူး အင်္ဂါအား ဓားဖြင့် မွေ၏.,3.ရင်ဘက်ကို ဒါးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ထိုးသတ်၏ အချက်ပေါင်းမရေနိုင်ပါ.3.နောက်ပြီးခွေးကုလားတွေက ကြက်သတ်သလို လယ်ကိုလှီးလိုက်ပါသေး၏................... ကောင်းကြသေးရဲလား ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကော ဟုတ်ပါလေစ......... ပြီးတော့ မီဒီယာတွေက မွတ်လို့မခေါ်နဲ့ တဲ့ဟီး ပြည်တွင်းနေ အစ္စလန်ဘာသာဝင် တဲ့ ရီစရာကောင်းလိုက်တာ..... ငွေရရင်အပြောင်းအဲမြန်တယ်ဆိုတာသိတ်ဟုတ်တာပဲနော်...
8 June 2012 00:59
၂၀၀၁ အေ၇း အခင်း က ကိုရင် က ကုလား ဆိုက်ကားသမား ကို ရိုက် လို့ စ ဖြစ် ဒါ။အချိန် က ၉း၃၀ (သို) ၁၀ နာရီ လောက် မှာ စ ဖြစ်ဒါ မသိ ဘဲ နဲ့ မု သား မပြော နဲ့။ဒါမှမဟုတ် ရဲ့ နဲ့ လိမ် နေဒါ။ရခိုင် ဘယ် လောက် ထိ ယဉ်ကျေး သလဲ ဗမာတွေ ကောင်း ကောင်း သိတယ်
8 June 2012 01:08
ရေသားထားတာကောင်းပါတယ်။ လက်ခံစရာတွေအများကြီးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
8 June 2012 01:37
Why u r consoling Kular's hand ? U remember your first love ..U dare come to Rakhine, we will slab u for this.Rakhine Ma
8 June 2012 13:38
ရခိုင်တွေက ပွင့်လင်းတယ်၊ ရိုးသားတယ်၊ ပရိယာယ်မာယာမရှိဘူး၊ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်မများဘူး။ အဲဒါကိုက ခင်ဗျားတို့က ခင်ဗျားတို့နဲ့မတူဘူးလို့ယူဆပြီး ရိုင်းတယ်လို့ပြောချင်ရင်လဲ ပြောပေတော့...
10 June 2012 01:59
ခွေးကုလားများသတိထား..... မင်းတို့တွေမြန်မာပြည်နေရာတိုင်နီးပါးဗလီဆောက်နိူင်ပေမယ့် မရနိူင်တဲ့မြို့ရှိသေးတယ်သိလား ? ငါတို့မြေမေါ်မှာနေပြီးငါတို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေကိုဆော်ကား ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းတို့အသွေးအသားထဲမှာသနေစတည်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ခံယူချက်တွေရှိလာလေလေ ချီးထက်ရွံလာလေလေဘဲ လေလိုင်းထဲကလေသနတ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူး ဒီအကြောင်းအရာတွေငါတို့နဲ့ပတ်သတ်ရပြီဆိုတဲ့တနေ့ မင်းတို့ အဖေ အလာကိုတိုင်တည်ပြီး ပူဆွေးနေရလိမ့်မယ် မင်းတို့ကအခုလူနည်းစုရခိုင်ကိုအနိူင်ကျင့်တယ် အေး နယူတန်ရဲ့လောအရတန်ပြန်မှုတိုင်းမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ် ဆိုတာသိထားခွေးကုလားတွေမင်းတို့ကြောင့်ငါအိပ်ချိန်တွေနောက်ကျနေပြီ...အေး....ပြောရဦးမယ် ပုပါးဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးကို သင်္ကြန်ချိန်ဆို ကျောက်ပန်းတောင်းမြို နဲံ ချောက်မြို့ အပြိုင်တက်ကြဧ။်အပြန်ချောက်သားအချို့ ခနဓာကိုယ်ချွတ်ယွင်းချက်တချို့ကိုအိမ်ပြန်လက်ဆောင်အဖြစ်ယူရ်ုပြန်ကြရဧ။် သိလားအဲဒီချောက်သားတွေက ခွေးကုလား တွေဆိုတာသံသရာတကွေ့မင်းတို့နဲ့ငါကြုံမှာပါသေအောင်သတ်နိူင်ရင်သတ်မသတ်နိူင်၇င်မင်းကို အဘား လို့တောင်အော်ချိန်မပေးဘူးမှတ် ကျောက်ပန်းတောင်းသိုင်းလောက၀င်များ
<<(ငှက်ခါး)ရခိုင်အရေးတွင် စစ်တပ်အား စောက်ဆဲနဲ့ပြောနေသူများကို စစ်တွေ မြို့မှ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.ရခိုင်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် ။မလာခင် ငါလာပြီ ဟု မိမိတို့ ဖေ့ဘုတ်wall များတွင် ကြေငြာခဲ့ပါ..ရခိုင်သို့ရောက်ပါကလည်း မိမိတို့ လက်နက်စွဲပြီး ကုလားများအား တိုက်ခဲ့စဉ်ကို ပုံနှင့်တကွ ဖေ့ဘုတ်တွင်ပြန်ဖြန့်ပါ....ထို့သို့ ရခိုင်သို့လည်းမလာရဲ.....ဓါးကိုင်ပြီး ကြက်သွန်တောင် မလှီးတတ်သူများဖေ့ဘုတ်တွင်စစ်တပ်အားဆဲရေးနေသော ခွေးလိုးမသားများစောက်ပါးစပ်တွေ ပိတ်ထား။ရခိုင်မှာ ၈ တန်းကျောင်းသားတောင်ဓါးဆွဲပြီး ကုလားကို ခုတ်နေတယ်
17 October 2012 12:54
ပြော မှား ဆို မှား ရှိ ခဲ့ ရင် ခွင့် လွတ် လို့ပြော ပါ ရစေ။ဒီ ကုလား တွေ အနိုင် ကျင့် သတ် ဖြတ် မှုဟာ နေ ရာ တိုင်း မှာ ပါ။ အိမ် ဖော် မ လေး ဆို လည်း အိမ် ဖော် မ လေး အ လျောက် ဒီ ကောင် တွေ အ ကွက် ချ ပြီး အ နိုင် ကျင့် ကြ ပါ တယ် နှစ် ယောက် သုံး ယောက် လောက် ဝိုင်း အနိုင် ကျင့် တာ ကို တိုင် ကြား သော် လည်း မျက် ကွယ် ပြု ခြင်း ခံထား ရ တဲ့ မြန် မာ အမျိုး သ မီး တွေ အများ အပြား ပါ။ ဒါ ကို လူ့ အခွင့် အ ရေး ဆို တဲ့ မျည်း တံ ပါး ပါး နဲ့ တိုင်း လို့ ရ နိုင် ပါ့မ လား ဗျာ။ ဘယ် မိဘ က မှ မိမိ သား သမီးတ ယောက် ကို မိမိ ရှေ့မှာ အဓမ္မ ကျင့် နေ တာ ကို လက် ပိုက် ကြည့် မယ် မ ထင် ပါ ဘူး ထို နည်း တူ မိ မိ နိုင် ငံ အား အကျိုး ပြု ချင် သော နိုင် ငံ့ ခေါင်း ဆောင် ကောင်း မှန် ပါ လျှင် ဒီ လို လူသား အခွင့် အရေး ဆို ပြီး ပျက် ကွယ် ပြု တာ ကို ရင် နာ လို့ မ ဆုံး ပါ ဘူး။နိုင် ငံ သား အခွင့်အရေး သာ မရှိ ရင် ကျွနုပ် တို့ US ကို သွား လည်း american တွေ ရ တဲ့အ ခွင့် အရေး တွေ ကို အတူ တူ ခံ စား ရမှာ သေ ချာ ပါ တယ်။ ကျွနုပ် တို့ ခေါင်း ဆောင် လို့ ထငိ မှတ် ထား သူ က လူ့ အ ခွင့် အရေး လို့ ဘဲ ကမ္ဘာ ကြီး က လေး စား အောင် ကြွေး ကြော် နေ တော့ နိုင် ငံ သား တစ် ယောက် အ နေ နဲ့ ရင် နာ လွန်း လို့ပါ။ တကယ် လို့ ခေါင်း ဆောင် ကောင်း ဖြစ် မည့် သူ မှန် လျှ င် ကျွနု တို့ မြန် မာ အမျိုး သမီး များ ဘက် သို့ လည်း အလေး ပေး စဉ်း စား ပေး စေ ချင် ပါ သည် နို ဘယ် ဆု ရှင် ကြီး ခင် ဗျား။